Dhaqdhaqaaqyada Ganacsi Ee Baardheere Oo Sii Xoogaystay
Magaalada Baardheere ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo aad xoogan waxaana suuqyadda ay yihiin kuwo aad u mashquulsan islamar ahaantaasina ay buux dhaafiyeen dad aad u fara badan oo guda jira dukaameeysi si ay u iibsadaan dhar iyo agabka kale ee lagu ciido.
Dad Dhexsocdo Bartamaha Baardheere
Walaw ay jiraan dhaqdhaqaaqyadaasi ganacsi ayaa inta badan dadku ay ka cabanayaan qiimaha iyo sicirka alaabta iyo badeecooyinka kale oo sare u kacay tan iyo markii ay soo baxeen burcad badeed ka qowlaysata baddaha iyo qulqulatooyin ganacsi adduunka.
Ganacsatada ayaa dhinacooda ay sheegayaan in aysan faa’iido ku qabin ganacsiga taasoo ay dusha kaga tureen qiimaha doolarka oo aan fadhin iyo dadka oo aan imaanaynin suuqyada iyadoo ay sheegeen in qiimaha ay wax gadayaan oo aysan ku kalsoonaan Karin maadaama uusan dollarku fadhin.
Gaadiid Ganacsi Laga Daabulayo
Qaar kamid ah dadkaasi oo aan la sheekaystay ayaa waxaa ay sheegeen in ay ka maageen inay wax u iibiyaan caruuteeda maadama ay lacagtii noqotay mid aan waxba taraynin.mid kamid ah dhalinyara oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in macawuusta sabae hindida ah laga siiyay 1,000,000 oo u dhiganta 30 $, taasina waxa uu tilmaamay in aysan awoodin dhalinyaro badan.
Suuqyadda Badarka ayaa waxaa ay u muuqdaan kuwo mashquulsan . waxaana ay haweenku ku mashquulsanyihiin beegidda badarka iyo galayda taasoo ay dadku ku bixiyaan sakaatul Fidriga.